Shirqoolkii Xamaro ee Jwxo-shiil, Sheekaa ka Damabyn – Rasaasa News
Nov 13, 2009 Jwxo-shiil, Nogob, shirqool, Xamaro
Munaafaqada Jwxo-shiil, waa qaciido odhanaysa, inta aan lagu fahmin maalinba sheeko hore leh keen, tanina waa shirqoolkii uu Xamaro ka sameeyey ee uu ku laayey 30 wiil oo hal reer ah, uguna yeedhay in uu saldhigyo Itobiya ka qabsaday, waa sheeko aan soconayn oo anaa shaacin warkaaga oo tolkayna u sheegi……
Warar naga soo gaadhaya gudaha Ogadeeniya ayaa waxay sheegayaan in maalintii Talaadada ahayd in degmada Xamro oo ka tirsan gabalka Nogob, loogu laayey si shirqool ah tiro kor u dhaaftay 30 wiil oo hore uga tisanaa Jabhada ONLF. Arintan ayaa la sheegayaa in uu ka dambeeyey wakiilka Jwxo-shiil ee gabalada Nogob, kolkii ay su,aalo waydiiyeen ciidankaasi.
Sidda ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil iyo ciidankiisa kolkii laga soo caydhiyey gabalka Qoraxeeye oo hore saldhig ugu ahaa ciidanka Jwxo, ayaa waxaa uu mataaneeyey ciidanaka Jwxo isaga raacsan walina aan wax fahmin ee ka soo jeeda gabalka Nogob iyo kuwa beesha ku raacsan isaga ee ka soo jeeda degmada Aware gabalka Dhagaxbuur. Ciidanka ka hawl gala Nogob oo badankoodu aan ahyn dad tababar soo maray ayaan iyagu waxba kala soconin munaafaqnimada Jwxo-shiil iyo sida uusan halgan iyo dad toona dan uga lahayn.
Waxaa uu madax uga dhigay Cidanka Nogbeed wiilal uu adeer u yahay oo ka soo jeeda gabalka dhagaxbuur maadaama uu labada gabal mataaneeyey. Hadab waxaa baryahan dambe soo badanayey fahamka ciidanka Nogbeed waxayna bilaabeen in ay soo goostaan oo ay yimaadaan maamulka Kaalinka 5aad, arintaas wax fahamka ah oo uusan jeclayn Jwxo-shiil.
Hadaba, waxaa bilaabay khiyaanooyinkii uu waligiiba ka samayn jiray Jwxo isaga oo kala dilaaya iskuna dilaaya Naftood hurayaalka. Sida caadiga ah waxaa Turaayaasha ciidanka haya rag xigtadiisa ah oo toos isaga uun ula soo xidhiidha, waxayna u sheegeen in ay bilaabeen ciidankii Nogbeed wax faham iyo goosasho.
Waxaa jiray ciidan ka amara diiday kuwa uu madaxda uga dhigay, waxayna doonayeen in lala soo hadal siiyo ruux aan ahayn Jwxo-shiil, maadama ay wax fahmeen, ninkii Madaxda u ahaa ayaa waxaa uu u sheegay waxaan idiin balamin Macalin Diirane iyo Jwxo-shiil ee xidhkaan sii jooga 7 saac ayaan Turaayaha idiin keeniye.
Wakiilkii Jwxo-shiil, wuxuu toos ula hadlay ciidan New Police ah oo joogay meel aan sidaas uga fogayn, wuxuuna yidhi waxaanu joogaan tilaamtaas hadii aad wax iska celin kartaan noo imaada, meesha uu sheegayey ayaa ilaalo loo diray waxaana la arkay ciidan Jwxo ah oo aan waxba ogayn. Hadab, sahankii New Police-ka waxay war galiyeen ciidankoodii waxaana halkaas lagu hareereeyey dhamaan ciidankii Jwxo ee halkaas joogay midna kama bixin.
Kolkii uu Ogaaday wakiilkii Jwxo-shiil, in gab laga dhigay ciidankaas ayuu soo sheegay 10 meelood oo uu dagaal ka dhacay iyo xeryo ay qabsadeen “waligay munaafaqo heerkaas gaadha ma arag”. Waxaad moodaa in Jwxo-shiil iyo wiilasha uu adeerka u yahay Toroyaasha u ahay [thuray] in ay heshiis ku yihiin in ay dabar jaraan beel, kol ay iyagu dilaan iyo kol ay ugu yeedhaan ciidanka xabashida la shaqeeya ee ay telefoonadooda haystaan.
Jwxo-shiil ruuxii in uu wanaag u wado ummada Somalida Ogadeeniya moodahayow waxaad daawataa waraysigii TV Universal, oo aan filay in ruux wax isku falaya ama in uun damqasho leh in uusan sidaas sameeyeen.
Waxaana waraysiga ka muuqatay munaafaqnimad uu ku jiro iyo sida uu ummada Ogadeeniya u kala gaabiyey oo kolkii su,aalaha la weydiiyey uu qarin kari waayey.
rasaas baa runta shaagee rafiiqaaga ka yeelo